Saddex Farshaxan La wadaag Sheekooyinka Boostada
Farshaxanka Farshaxanka waa ururo horumarineed oo dhaqaale iyo bulsho ee farshaxanada iyo fanaaniinta. Waxay ka shaqeeyaan inay dhisaan bulshooyin xooggan, xaafado, iyo dhaqaale, iyaga oo aaminsan in farshaxannadu ay yihiin qodob muhiim ah oo ka mid ah shaqadaas. Waxay ujeedadoodu tahay inay kobciyaan beelaha firfircoon iyaga oo xiriirinaya farshaxanka leh xirfadaha, macluumaadka, iyo adeegyada ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan iyo nolol. Hoos waxaa ku yaala markhaatiyaal farshaxan ah oo ka soo shaqeeyey Farshaxanka Farshaxanka si ay u sii wataan xirfadahooda.
Sarah Nassif, Farshaxan Sawireed
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka faa'iidaysto khayraadka la-talinta xirfadlayaasha ee Springboard. Iyada oo haysashada fannaani khibrad leh ayaa i siinaya meel aan kala soocayo fursadaha kala duwan ee aan horey u haysto, si macquul ah u kala hormariyo una qorshee sida loo maalgeliyo fikradaha kale ee aan ka shaqeynayo. Saacado badan oo ka mid ah internetka ayaa badali kara khibradda la-talinta ee qof-qof ah. Agaasimaha Khayraadka Farshaxanka Andy Sturdevant ayaa horay iigu caawiyay inaan caddeeyo ujeedooyinkeyga ugu sarreeya, waxaana igu xirey ilaha agagaarka sida maktabadda Farshaxanka ee Midway Modern. Waa dareen dhab ah oo taageero ah oo ku saabsan waxa inta badan socdaalka dareenka ah ee ku saabsan noloshayda, iyo nolosha, sida farshaxan.
"Saacado badan oo internetka ah ma bedeli karaan hal-hal-qof, waayo-aragnimo la-talin qof ahaaneed." -SARAH NASSIF, ARTIST MUUQAAL AH
Springboard waxay ahayd kheyraad lagu kalsoonaan karo oo laga helayo maalintaydii ugu horeysay ee magaalooyinka Twin, horraantii 1990naadkii. Muddo sanado ah, waxaan helay caawimaad ku saabsan xisaabinta, xuquuqda daabacaada, arrimaha sharciga iyo daryeelka caafimaadka.
Iyada oo qayb ka ah Mashruuca McKnight ee 2013-ka, waxaan ku hawlanahay inaan ka caawiyo soo bandhigida rabitaankeyga ugu horeeya iyo wakiil caafimaad, wax aan dareemay inaan u baahdo fiiro degdeg ah. Xaaladda degdeg ah oo ka timaada mid ka mid ah suugaanyahannada ugu caansan ee degaanka ayaa si xooggan diirada u saarnaa baahida aan u qabo qof kaliya si aan ugu diyaargaroobo lama huraan, iyo in aan si toos ah ugu shaqeeyo shaqadayda. Springboard waxay igu xiran tahay Chase Buzzell ee Levon Chase, PLLC, kuwaas oo bixiyay talo fiican oo qiimo macquul ah. Sidoo kale qayb ka mid ah wadahadalkaas, waxaa wareysiga Nadja Baer wareysi siiyey sheeko ku saabsan arimaha farshaxanka. Agaasimaha Barnaamijka Kobcinta Sanatiska Noah Keesecker ayaa ila qaatay dhowr saacadood, aniga oo eegaya boggeyga internetka iyo habka aan u adeegsado suuqgeynta emailka. Waddadu waa sida gaar ah sida farshaxanka, laakiin Springboard waxay gacan ka geysataa joogsiyada intiisa kale, rakibidda iyo dejinta oo qayb muhiim ah ka ah safar kasta.
Maaddaama uu yahay tababare McKnight oo ka mid ah Xarunta Playwrights Centre mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee sanadkeeyga isweydaarsiga ayaa awoodey inuu ka faa'iidaysto barnaamijka Farshaxanimada ee Farshaxanka iyo wuxuu la shaqeeyaa Nuur Keesecker si uu iiga caawiyo muddada dheer naqshadeynta bogga internetka ee xirfadeyda. Nuux wuxuu ahaa mid aad uwanaagsan oo ku saabsan dhammaan arrimaha ku lug leh boggaga internetka ee martigelinta iyo fursadaha naqshadeynta, wuxuuna sidoo kale iga caawiyay balaarinta aqoontayda ku saabsan meheradaha kala duwan ee warbaahinta bulshada iyo kuwaa kuwa ugu faa'iideysan lahaa inta lagu jiro marxaladdan xirfaddeyda. Ma malayn karo in aan fursad u helin adeeggan oo keliya oo aan aniga i siiyey oo kaliya oo aan awood u leeyahay inuu barto sida loo calaamadiyo oo aan ugu dhiirrigeliyo aniga ahaan habab badan oo firfircoon inta lagu guda jiro sannad-guuritaankeyga, laakiin sidoo kale wuxuu i siiyey aqoonta aaggan si ay uga faa'iidaystaan horey u socoshada inta lagu jiro xirfaddayda farshaxanka.